Chinja yako Apple Watch ive muhomwe wachi | Ndinobva mac
El Apple Watch ndiyo yakatengesa zvakanyanya smartwatch mupasi rose. Uye semamwe madhizaini eApple, pane zvakawanda zvekusarudzika, pamwe nezvinowanikwa zviripo. Sezvo iwe uchinyatso kuziva, chimwe chezvinhu zvikuru zveApple Watch kugona kuchinja mabhanhire ayo eiyo modhi inokodzera zvakanyanya zvaunoda zvezuva iri: kudya kwemanheru; chiitiko chisina kujairika kana mitambo.
Nekudaro, iyo kambani yeCalifornia Bucardo ine rakakura bhuku zvishongedzo zveApple Watch uye vanokupa iwe mukana wekuchichinja kuita wachi muhomwe. Ikozvino sezvo iyo "Vintage" dhizaini yakakurumbira, kambani yakafunga kuti imwe yemhinduro ichave yekugona kushandura zviri nyore neyekuwedzera kune iyo kupfeka kubva Cupertino mune chidimbu che retro. Uyezve, ingave iri nzira yekubhadhara mutero kune chimiro chepakutanga cheizvi zvishongedzo zvakapa zvakanyanya kunyika yefashoni.
Kune dzimwe nzira dzakasiyana uye dhizaini. Chii chimwezve, isu tinogona kunyange kuwana yakaganhurirwa vhezheni mune nhema pakati peiyo Bucardo sarudzo. kuvapo Dzimwe nzira dzeApple Watch Series 1, Series 2 uye Series 3. Uye ese acho ane mamodheru ayo akagadzirwa nesimbi isina chinhu ine bhati regoridhe kana sirivheri. Kazhinji, iwo mamodheru anoenderana neiyo Series 2 anoenderana neChitatu 3.
Izvo zvakare zvakareruka kuisa: sezvavaizoita neyakajairika tambo, ine Bucardo mutsetse iwe unofanirwa chete kugadzirisa iyo yekushandisa iyo iwe yaunofarira zvakanyanya kuburikidza neaside slots eApple Watch. Mitengo yezvinhu izvi zveAmerican brand inotanga kubva $ 119 kusvika $ 219 (kubva ku100 euros kusvika ku185 euros). Uyezve, vanotakura pasirese, saka hauna chikonzero chekusava neimwe nzira yeApple Watch yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chinja yako Apple Watch ive muhomwe wachi
Amazon inomhanya kunze kweApple TV 4k maawa mushure mekuisa pakutengesa